Ku rakibida Wallabag VPS | Laga soo bilaabo Linux
Pocket waa adeeg caan ah oo noo ogolaanaya inaan keydinno boggaga si aan hadhow si deggan ugu aqrino. Waxa ka dhigaya adeeg aad u wanaagsan ayaa ah inaan kuwada dubaridi karno waxa aan ka keydsaneyno biraawsarka taleefankeena isla markaana aan awoodno inaan macluumaadka ku qaadno meel kasta. Laakiin jeebku dhibaato ayuu leeyahay, waa mid lahaansho leh.
Akhrinta Aad u Linux Waxaan ogaaday inay jirto meel furan oo furan oo la yiraahdo Wallabag, oo aan u adeegsan karno laba siyaabood:
1. Waxaan ku abuureynaa akoon bilaash ah at Framabag
2. Ama waxaan ku rakibnaa adeegeena.
Waana si sax ah waxa aan ugu talo galay inaan ku muujiyo maqaalkan, sida loogu rakibo Wallabag qaab fudud VPS-keena.
Tusaalahan waxaan u maleyneynaa inaan horey u leenahay a LAMP (Linux / Apache / MySQL / PHP), kiiskeyga waxaan ku sameeyay talaabooyinka rakibaadda Debian, markaa waxaan aadi doonnaa kaliya qeybta muhiimka ah
1 Abuuritaanka keydka macluumaadka
2 Ku rakibidda Wallabag
3 Maxaad sameysaa kadib rakibida Wallabag?
Abuuritaanka keydka macluumaadka
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ku sameysano xog-ururin MySQL ama Postgres loogu talagalay Wallabag. Kiiskeyga waxaan ku sameyn doonaa MySQL. Waxaan u adeegsan karnaa PHPMyAdmin tan, laakiin xaaladdan waxaan ku sameyn doonnaa boosteejada, marka waxaan fulineynaa waxyaabaha soo socda:
$ mysql -u root-p
Waxaan dhigeynaa lambarkayaga sirta ah ee MySQL ka dibna waxaan abuureynaa keydka macluumaadka ee loo yaqaan * wallabag *, in kastoo aad dooran karto magaca aad rabto:
mysql> abuur macluumaadka wallabag; Su'aal OK, 1 saf oo saameyn ku yeeshay (0.03 sec)
Marka la sameeyo keydka macluumaadka, waxaan u dejineynaa mudnaanta isticmaaleha * wallabag *.
mysql> KU SIIYO DHAMMAAN XAQIIQOOYINKA LOOGU TALAGALAY wallabag. * '' wallabag '@' localhost 'OO AQOONSADAY' Fure '; Su'aal Wanaagsan, 0 safaf ayaa saameeyay (0.13 sec)
Sida caqligal ah halka * password * uu dhaho waxaan dhigeynaa furaha keydka macluumaadka. Ugu dambeyntii waxaan fulin:
mysql> XAQA SHARCIYADA; Su'aal OK, 0 safafka saameeyay (0.05 sec)
Waana intaas, waxaan hadda ka bixi karnaa MySQL.
Ku rakibidda Wallabag
Marka aan ka baxno MySQL waxaan ku qoreynaa boosteejada:
$ wget -c http://wllbg.org/latest $ mv ugu dambeeyay wallabag.zip $ unzip wallabag.zip $ mv wallabag-1.9 wallabag $ sudo mv wallabag / var / www / wallabag $ cd / var / www / $ sudo chown -R www-data: www-data wallabag / $ sudo chmod -R 755 wallabag /
Waxaan u maleynayaa inaad fahantay wixii aan sameynay. Marka hore feylka ayaan soo dejisannaa, ka dib ayaan dib u magacawnaa, ka soo saarnaa waxyaabaha ku jira, waxaan bedelnaa magaca galka ku haray soo saarista, ka dib marka mudnaanta maamulka aan u wareejino galka ay ku yaalliin boggeena internetka Ugu dambeyntii waxaan ku dhiseynaa milkiilaha iyo rukhsadaha lagama maarmaanka ah galka.
Hadda waa inaan ku abuurnnaa VHost Apache, markaa waan fulinnaa:
Oo waxaan ku dhejinnay gudaha:
ServerAdmin elav@mydomain.ltd ServerName wallabag.mydomain.ltd DocumentRoot / var / www / wallabag / ErrorLog "/var/log/apache80/wallabag_error.log" CustomLog "/var/log/apache2/wallabag_access.log" common " Ikhtiyaarrada Ikhtiyaarrada FollowSymLinks MultiViews AllowOverride Dhammaan Amarka u oggolow, u oggolow oggolaanshaha dhammaan
$ sudo /etc/init.d/apache2 dib u bilaw
Waxaan fureynaa biraawsar oo marin u helnaa * wallabag.midominio.ltd * waana inaan helnaa wax sidan oo kale ah:
Waa inaan ogaanno laba shay ka hor inta aynaan bilaabin:
1. Eeg ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka u ah rakibidda Wallabag adigoo gujinaya batoonka oranaya: Digniinta qaarkood, laakiin kan ugu yar ayaa halkan jooga!
2. Waxaan ku khasbannahay inaan rakibno laami. Kaliya waa inaan riixnaa badhanka oranaya: Soodejiso Vendor.zip oo si toos ah ayuu u rakibayaa.
Markii aan tallaabada labaad qaadno waxaan heli doonnaa tan:
Ogsoonow in hadda aan helnay ikhtiyaarka aan ku dooran karno xogta aan adeegsan doonno, taas oo sidaan horay u sheegay ay noqon doonto MySQL. Marka waxaan sii wadaynaa inaanu ka buuxino meelaha ay ka kooban yihiin xogta DB.
Hadda waxaan dooranay magaca, lambarka sirta iyo emaylka (ikhtiyaar kale) si aad u maamusho Wallabag:
Waxaan gujineynaa Ku rakib Wallabag haddii wax walbana si wanaagsan u socdaan waxaan helnaa farriintan:
Waxaan gujineynaa: * Halkan guji si aad uhesho foomka soo galida * waxayna na weydiin doontaa usernamekeena iyo lambarka sirta ah markaan helno, waxaan arki doonaa tan:
Diyaar garow, horey ayaan u rakibnay Wallabag.
Maxaad sameysaa kadib rakibida Wallabag?
Hagaag, waxa ugu horeeya waa inaad aadaa Settings oo aad doorataa luqada aan dooneyno (asal ahaan waxay noqon doontaa Ingiriis). Waxaan sidoo kale dooran karnaa mawduuca aasaasiga ah ee loogu talagalay Wallabag, oo xitaa soo dhoofinta maqaalladayada ku keydsan jeebka, Akhriska, Instapaper ee json ama qaabka html. Waxaan sidoo kale u dhoofin karnaa maqaaladeena ePub3, Mobi iyo PDF.
Waxaan ku rakibi karnaa Wallabag kordhin ahaan Mozilla Firefox iyo Google Chrome xiriiriyeyaasha soo socda:
Android: iyada oo loo marayo F-Droid or iyada oo loo marayo Google Play
macruufka ah: soo dejiso arjiga
Windows Phone: soo dejiso arjiga
Waana tan, waxaan u diri karnaa Jeeb duulaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku rakibidda Wallabag VPS
Waxay u egtahay wax fiican, waxaan rabaa inaan helo vps si aan ula shaashado, ama "u sameeyo" mid guriga lagu sameeyo.
Elav, nasiib ahaan ma ogid haddii lagu rakibi karo Raspberry Pi B +, xaalad kastoo aan ku jiro waan hubin doonaa, kuwa ugu cadcad. Waad ku mahadsantahay tuto 😀
Wallabag waxaa lagu rakibi karaa Raspberry, waxaan ku hayaa ArkOS kaas oo isku dhafan sida fiilada, oo leh hawlgal la aqbali karo.
Waxaan hayaa isku-darka soo socda
Marnaba ma awoodin inaan isticmaalo waxyaalahaas oo kale, laakiin haddii aad ku rakibto Debian distro iyaga loogu talagalay oo aad LAMP ku dhajiso distoorkan, dabcan waad awoodaa 😀
Waad ku mahadsan tahay markaan imaado (wax yar ayaa hadhay) Waxaan balan qaadayaa inaan wax u qoro DL 😀
Wanaagsan .. waxay noqon doontaa wax lagu farxo inaad halkan ka wada shaqeyso.
Midkan weyn, waxaa ka maqnaan lahaa codsi Firefox OS ah mar dambe
Ku jawaab Agustin Ferrario
Aad u xiiso badan, waa u qalantaa in la tijaabiyo, waxa ugu fiican ayaa ah inay tahay il furan oo waliba ka sii wanaagsan inay isticmaasho barnaamijyada ugu caansan uguna caansan adduunka koodh bilaash ah: Linux, Php iyo Mysql.
Waxaan ka mahadcelineynaa qoraalkaaga oo aan kaliya na siinin qalab waxtar leh laakiin sidoo kale gacan ka geysta ballaarinta ilaha furan.
Ku jawaab Dani Martin
La heli karo kernel Linux 4.0 + News